Soo dejisan Zona 2.1.0.1 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Zona
Zona – macmiil torrent la set badan oo fursadaha kala duwan. Software wuxuu kuu ogol yahay inaad la qabsato xawaaraha dajinta iyo koombiyuutarka, af dhigay iyo hoosaad video, qabsato ogeysiin ah oo ku saabsan filimada cusub ama taxane iwm Zona ka mid ah ay engine search u gaar ah taas oo awood u raadinta filimada, muusikada ama kulan ay qaybaha iyo dalal. Software wuxuu kuu ogol yahay in ay dhegeystaan ​​idaacadaha ka, daawan channels TV ama kala duwan videos isticmaalaya ciyaaryahanka dhisay-in. Zona sidoo kale macaamila VK shabakad bulsho iyo u saamaxaaya in ay dhagaystaan ​​ama download ka files audio.
Download faylasha torrent
Doorashada Great of content
Waxaa la dhisay-in search engine
Soo dejisan Zona
Faallo ku saabsan Zona
Zona Xirfadaha la xiriira
BitComet – waa barnaamij barnaamij looga soo dejinayo feylasha shabakadaha torrent iyo FTP. Softiweerku wuxuu awood u siinayaa inuu kala soo dego dhowr faylal isku mar isla markaana dib u fiiriso.
qalab caan ah in kuu ogolaanayaa inaad isgaadhsiin ee CHAT gaar ah ama koox, ka dhigi cod ama video calls iyo abaabulo shirar video.
software A for isbarbardhigga muuqaal ah kala duwanaansho kala duwan ee file ka mid ah marka la eego kala duwanaanshaha .Wadashaqayntaas iyo ka mid ah isbedel soo bandhigay.
Blender – waa qalab ku habboon in lagu shaqeeyo sawirada 3D. Softiweerka waxaa ku jira qalab fara badan oo loogu tala galay samaynta iyo abuurista ciyaaraha fiidiyaha.
Dolphin – aalad lagu ciyaaro cayaaraha GameCube iyo Wii consoles game. Softiweerku wuxuu wanaajinayaa tayada sawirka wuxuuna awood u siinayaa isticmaalka qalabka ciyaarta.